France ayaa ka mid ah dalalka ugu aadka loo qiimeeyo ee ay shukulaatada. Aad hubto in ay u arkaan wax badan oo ka mid ah dukaamada shukulaatada halka samaynta aad dhex marayay waddooyinka caasimadda. Dhab ahaan, laga yaabaa in aad la dabooshay la tirada dukaamada shukulaatada aad la kulanto. Si loo hubiyo in aad la kulanto Paris ugu fiican in uu dalab, waxaan weydiiyey wareegsan, waayo, waa booqasho dukaanka shukulaatada ee Paris. Qaar badan oo ka jawaabay in uu leeyahay in uu noqdo Debauve iyo Gallais. dukaanka fantastic Tani ma aha oo kaliya ugu da'da weyn ee magaalada, laakiin waa classic ah. Waxaa la furay 1800-kii iyo waxa uu abuuray shukulaatada delicious for dadweynaha tan iyo markii. Dhab ahaan, waxayna ahaayeen wax weyn Markay fureen si ay u noqday qeybiyeyaasha shukulaatada, waayo, Maxkamadda Faransiis iyo Napoleon ee. Hoggaamiyayaasha badan oo Faransiis weyn raaxeysaneysaa shukulaatada, iyo si aad awoodid.
Netherlands ayaa sida caadiga ah ma aha meesha ugu horeysa ee ku soo dhaca maskaxdooda marka aad u malaynayso of shokolaatada. Si kastaba ha ahaatee, weli waa a meel weyn dhadhamin qaar ka mid ah shokolaatada ugu fiican adduunka. Mid ka mid ah dukaamada caan ugu yahay in Amsterdam. Vanroselen waa goob booqo qofkasta oo doonaya inuu isku dayo shukulaatada heer caalami ah. Wax kasta oo ay dukaanka waa handmade, combining chocolate with various fruits and herbs to create unique and mouth watering treats.
Haddii aad raadinayso dukaan in uu yahay hodan ku ah taariikhda iyo dhadhan, ka dibna eegto wax dheeraad ah ka badan Erich Hamann in West Berlin. Laba waxyaalood dhigi kaydkan taagan. marka hore, waa taariikh cajiib ah dukaanka laftiisa. Waxaanay taariikhdeedu u back to 1928, oo waxaa ku yaalla dhismaha style Bauhaus in badbaaday dagaalkii labaad ee dunida. Marka labaad, waa sharaf dhaqanka iyo dhadhanka weyn ay. Waxay weli waxay leeyihiin recipe asalka ah laga furitaanka dukaamada iyo jacaylka in diiradda on shukulaatada madow. Si kastaba ha ahaatee, xataa waxay bixiyaan shukulaatada caddaan iyo dhadhan kale oo kala duwan. Ay jilif shukulaatada waa hadalka magaalada, si loo hubiyo in sameeyaan in ay isku dayaan haddii aad soo booqato dukaanka.
Belgium ka mid ah ugu fiican yahay marka ay timaado farshaxanka abuuraya shukulaatada. Socodka iyada oo magaalooyinka Belgium, waxaad arki doontaa badan oo jajab delicious soo bandhigay. Mid ka mid ah meelaha ugu fiican si aad u hesho shukulaatada fantastic waa Line Chocolate The in Bruges. dukaanka waa booqashadii waajib ah qof kasta in jecel yahay gabal wanaagsan ee shukulaatada. Waxaa jira waxyaabo badan oo ah dhadhan-dhaqameed iyo wax badan oo xiiso leh iyo shokolaatada tijaabo ah uu ka soo xusho. Maxaa ka dhigay Chocolate ku Line taagan waa hab ka mid ah samaynta shukulaatada ay. Waxay shukulaatada toos ah uga soo bean iyo ku takhasusay qalabka shiidi iyo isku qasin shukulaatada. Marka xiga aad ku sugan tahay Bruges, qaado waqti aad ku raaxaysato dhadhan cajiib ah oo waayo-aragnimo fiican at Line Chocolate The.
Switzerland caan ku tahay shukulaatada. Dhab ahaan, Nuguma habboona inaan karaa shukulaatada caano Swiss ah. Marka aad hesho si aad dalka, waxaad arki doontaa in shukulaatada meel kasta waa. Ku dhowaad meel kasta oo aad tagto waxaa ka buuxa dukaamada shukulaatada bixiya cunto yar soo cuno. Haddii aad rabto in aad la kulanto Switzerland ugu fiican in uu dalab, badan isku raacsan yihiin in Max Chocolatier waa meel kaamil ah si ay u booqdaan. Waa uu jecel yahay degaanka ah, iyo sabab fiican. Waxay isticmaalaan waxyaabaha tayo sare iyo soo saaro qaar ka mid ah shukulaatada ugu wanaagsan ee Switzerland. Waxay sidoo kale leeyihiin gaar ah, afar xilli menu dhigaya dhadhan shukulaatada xilliyeed. Gebogebadii, waxaad la kulmi karaan noocyo kala duwan oo dhadhankii, ku xiran tahay marka aad booqato dukaanka.
Hungary waa jawharad qarsoon for chocoholics. Waxay noocyo kala duwan oo macmacaan cajiib ah, iyo shokolaatada waa gaar ah. A waa inay booqdaan inay ku raaxaystaan ​​shukulaatada la yaab leh waa Chocolate Rozsavolgyi ee Budapest. Waxay bixisaa badan oo kuula dhaqmo macaan iyo, ugu muhiimsan, curiyay yaab leh shukulaatada. Ay shukulaatada gaari warkiisii ​​caalamiga ah la bonbons ay shukulaatada, iyo marka aad isku daydo iyaga, waxaa iska cad sababta. taajir, rata jajab ka farxiya jannada ku jira. Jooji by haddii aad tahay safraya si Budapest.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Dukaamada Chocolate Best In Europe” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-chocolate-stores-europe%2F- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / in ay / TR ama / luqadaha de iyo ka badan.
#candyshop #dukaamada shukulaatada europetravel Foodie